चितवनका विशाल सेढाइ र धादिङका रोशन छ’त्कुल्लीको अष्ट्रेलियामा मृ’त्यु ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठअस्ट्रेलिया प्रवासचितवनका विशाल सेढाइ र धादिङका रोशन छ’त्कुल्लीको अष्ट्रेलियामा मृ’त्यु !
सिड्नी, अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा शुक्रबार दुई नेपाली युवाको मृ’त्यु भएको छ । क्या’म्पिंगका लागि स्थानीय ब’रोअरा ने’शनल पार्कमा शुक्रबार राति ७ः३० बजे आ’पतकालीन सेवालाई बोलाइएको थियो । तत्कालै घ’टनास्थलमा पुगेका उ’द्धारकर्मीले एक जना व्यक्तिलाई सा’स फे’र्न अ’प्ठेरो भएको अवस्थामा उ’द्धार गरी हेलिकोप्टर मार्फत अस्पताल लगेका थिए ।
उ’द्धार गरिएका व्यक्ति प्रदिप पाण्डे भएको बताइएको छ ।अर्कोतर्फ, ह’राईरहेका दुईजनाको खो’जी जा’री राखेका उ’द्धारकर्मीले राति ११ः३० बजे मात्र उनीहरुको श’व भेट्न सफल भएका थिए । दिउँसोदेखि नै क्या’म्पिंगमा गएका उनीहरु साँझ प’रेपछि पानीमा पौ’डीका लागि छि’रेका थिए ।
त्यसपछि द’लदलमा भा’सिएका कारण उनीहरु माथि आ’उन सकेनन् । प्रहरीले दुईजनाको श’व पो’ष्ट’मा’र्ट’म’का लागि पठाएको छ । मृ’तकका एक आफन्तले दिएको जानकारी अनुसार मृ’त्यु हुनेमा विशाल सेढाई र रोशन छ’त्कुली छन् । उनीहरु क्रमशः २६ र २३ वर्ष उमेरका थिए । सेढाई पेशाले ई’न्जिनियर हुन् । अष्ट्रेलियाको पढाई स’काएर एक वर्षदेखि उनी आफ्नो पेशामा कार्यरत थिए ।
चंगा उडाउँदै अमेरिकी राजदूतले दिए नेपाली भाषामा दशैँको शुभकामना
यी ८ जोडी जसले फिल्ममा सँगै काम गर्दा गर्दै प्रेममा परेर बिहे गरे
लकडाउनले बाटो खाली भएपछि नेहाको मस्ती…
चर्चामा साम्राज्ञीको ‘बो’ल्ड’ लुक्स’ [तस्बिर सहित]
कोरोनाको जो’खिम ब’ढे पनि छायांकन नरोकिएका यी नेपाली चलचित्र
नेपाली युबा चर्चित अन्तरास्ट्रिय रियालिटी शोको सेमिफाइनलमा
‘सूर्य चन्द्र अंकित मेरो देश’ बोलको राष्ट्रिय गीत सार्वजनिक